यस्ता छन्, पानीमा भिज्नुको फाइदा ! « Online Sajha
यस्ता छन्, पानीमा भिज्नुको फाइदा !
वर्षातको पानी भिज्न कतिपयलाई मज्जा लाग्छ त कतिपय पानी भन्ने बित्तिकै तर्सिने गर्छन्। तर वर्षातको पानीमा भिज्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भने निकै लाभदायक हुन्छ। वर्षातको पानीले तपाईको छाला र कपालमा निकै धेरै फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौं, पानीमा भिज्नुको फाइदाबारे।
बिहानै उठेर आकाशबाट बर्षिएको पानीले मुख धुने गर्न निकै लाभदायक हुन्छ। आकाशको पानी थापेर त्यो पानीले मुख धुने हो भने अनुहारको छालाको रंग सफा हुनुका साथै दागधब्बा पनि हटेर जान्छ।
वर्षातको पानीलाई कुनै भाँडोमा जम्मा गरेर राख्ने अनि त्यो पानी बेलुका सुत्नु अघि छालामा लगाउने गर्नाले छाला नरम र दागरहित बन्छ। यदि तपाईको अनुहारको छाला दागसहितको र कडा छ भने वर्षातको पानी थापेर लगाउने गर्नुहोस्।
वर्षातको पानी भाँडोमा थापेर आफ्नो कपाल धुने गरे त्यसले निकै धेरै फाइदा पुर्याउँछ। वर्षातको पानीले धोएको कपाल नरम र आकर्षक देखिन्छ।
वर्षातको पानीमा नुहाउनु पनि स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। आकाशबाट बर्षिएको पानीमा नुहाउँनाले छालाको एकदमै राम्रोसँग प्राकृतिक तरिकाले सफाइ हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन, वर्षातको पानीले छालामा रहेका सानातिना रोगहरु पनि हटेर जानुका साथै स्वस्थ पनि बनाउँछ।
प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र २० गते शुक्रवार
मोबाइल हेर्ने बालबालिका धेरै रिसाह !
गर्मी मौसममा खानुहोस्, यी फल !
यस्ता छन् बिहान उठ्न बित्तिकै गर्नुपर्ने ९ काम
शौचालय गएपछि हात धुनु जरूरी !
अनुहार चम्काउन नुन !
उठेर होइन, बसेर पानी पिउने गरौँ !